Tag: fahitana | Martech Zone
Zoma, Aprily 10, 2015 Zoma, Aprily 10, 2015 Jim Sterne
Merchandising (araka ny Wikipedia hatramin'ny 19 martsa tamin'ny 10:18 maraina Pacific Daylight Time) dia: Ny fanao rehetra izay mandray anjara amin'ny fivarotana vokatra amin'ny mpanjifa antsinjarany. Amin'ny ambaratonga fivarotana antsinjarany, ny varotra dia manondro ny karazan-vokatra azo amidy sy ny fampisehoana ireo vokatra ireo amin'ny fomba izay mandrisika ny fahalianana ary mitaona ny mpanjifa hividy. Ny tantara voalohany (apokrifa) momba ny varotra sy ny angon-drakitra dia mikasika ny diapers azo alefa sy
Zoma, Oktobra 18, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Raha mbola eo am-pelatanana ny fototry ny fananganana tranokala, ny atiny izao no mitondra soa amin'ny orinasa mampiasa vola amin'ny paikady marketing lehibe. Orinasa maro izay nanambola be tamin'ny fanatsarana ny motera fikarohana no nahita fa very ireo fampiasam-bola… saingy ireo orinasa izay nanohy nanery ny atiny mifandraika, matetika ary vao haingana izay nanome lanja ny mpihaino azy dia mahita hatrany ny valiny. Vonona ve ianao amin'ny tontolo vaovao fanatsarana ny motera fikarohana,
Zoma, Desambra 10, 2010 Alatsinainy Oktobra 3, 2011 Matt Chandler
Miandry fatratra ny fahatongavan'ny Google Zeitgeist isan-taona aho. Tsy hoe noho ny fahaizako miteny azy betsaka fotsiny, fa koa satria fitsaboana mahafinaritra isan-taona mahafinaritra ny mijery ny fanjakan'ny fikarohana tamin'ny taona lasa.